15 -ka Buug ee ugu Wanaagsan ee Macallin kasta uu akhriyo | Liiska 2022 | Talooyin
Bogga ugu weyn 15 -ka Buug ee ugu Wanaagsan ee Macallin kasta uu akhriyo | 2022 Liiska
Weligaa ma maqashay odhaahda ah, 'macallin baa saameeya daa'in; marna ma sheegi karo halka saamayntiisu istaagto. ' Waxay soo jeedinaysaa in macallimiintu yihiin isha iyo tiirarka qofka aan nolosha ka noqonno. Macallimiintuna waxay akhriyaan buugaag.
Waxaad igu raaci doontaa in macallimiinta ugu fiican ay yihiin akhristayaal.
Akhrisku waa ficil garasho oo albaabada u fura aqoonta - waa xirfad shardi u ah in qofku macallin noqdo.
Dhanka kale, waxaan ka wada hadli doonnaa buugaagta ugu wanaagsan akhristayaasha. Nala joog!
Haddaba, maxay macallimiintu wax u akhrinayaan?
Mid ka mid ah shuruudaha looga baahan yahay inuu noqdo macallin la aqoonsan yahay waa barashada. Macallimiintu waa inay bartaan aqoonta waxay rabaan inay dhigaan, heerka waxbarasho ee ay rabaan inay dhigaan, tanina waxay ku suuroobi kartaa akhriska.
Akhrisku wuxuu siinayaa macallimiinta awood ay ku fahmaan ardayda oo ay la yimaadaan istiraatiijiyad isgaarsiineed oo ay ku maareeyaan arrimo kala duwan oo la xiriira barashada ardayga.
Waa maxay buugaagta ugu fiican ee ay tahay in macallimiintu akhriyaan?
Dhammaan macallimiintu waa inay akhriyaan buugaag loo qoondeeyay inay yihiin dhiirigelin, maanka, hoggaaminta, maareynta fasalka, natiijooyinka ardayga oo la hagaajiyay, waxbaridda, dhaqanka barashada, iyo cilmi nafsiga waxbarashada.
Macallimiinta Ingiriiska, akhrinta buugaagta horumarinta xirfadda ayaa lagula talinayaa.
Macallimiinta wax akhriska u qaata sida raaxada waxay fursad u haystaan ​​inay bixiyaan fasalka ugu fiican. Waa macallimiinta buugga ugu fiican.
Akhri: 15 Kutub ee ugu Wanaagsan Tobankii | 2022 Liiska
Maxay yihiin buugaagta ugu fiican macallimiinta sannadka 2022?
Waan ogahay inaad aad u xiisaynaysay inaad ogaato waxa ay yihiin buugaagta ugu fiican macallimiinta. Neefso oo naso waayo waxaad akhrinaysaa maqaalka saxda ah.
Hoos waxaa ku qoran liiska 15ka Buug ee ugu Wanaagsan dhammaan Macallimiintu waa inay akhriyaan 2022;
1. Buugga Farxadda: Farxadda Waarta ee Dunida Isbeddelaysa waxaa qoray Dalai Lama iyo Desmond Tutu
Buugga Farxaddu waa mid ay tahay in loo akhriyo macallin kasta sannadka 2022. Ka dib dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee uu sababay Covid-19-ka adduunka, macallin kasta wuxuu rabi doonaa inuu barto sida loo baro ardayda caqabadaha adduunka is-beddelaya iyo sida loola qabsado.
Waxaa qoray Dalai Lama, Desmond Tutu, iyo Douglas Carlton Abrams, buuggu wuxuu ka hadlayaa sida loo helo farxad waarta adduunkan mar walba isbedelaya. Qorayaashu waxay wadaagaan waayo -aragnimadooda ku saabsan sida farxadda waarta loo dareemo iyo sida loo gaadho.
Buuggan waxaa laga iibsan karaa Amazon ama bilaash ah buugaag maqal ah.
Akhri: 10 Siyaabood oo Aan La Shaacin Oo Lacag Laga Helo eBooks -ka 2022 -ka
2. Jidhku wuxuu ilaaliyaa Dhibcaha: Maskaxda, Maskaxda, iyo Jidhka ee Bogsiinta Jug -jugle by Bessel van der Kolk MD
Jidhka Dhibcaha Hayaa waa buug cilmi -nafsiyeed waxbarasho oo uu qoray dhakhtarka cilminafsiga ee Maraykanka Bessel van der Kolk MD Buuggu wuxuu ka hadlayaa dhaawacyada - wuxuu si cad u qeexayaa, wuxuu iftiiminayaa sababaha dhaawacyada, iyo daaweynta.
XIDHIIDHKA: 15 Aaladaha Horumarinta App -ka Mobile -ka ee Bilaashka ah ee Bilowga ah 2022 -ka
Kani waa buuggii ugu fiicnaa ee macallin kasta akhriyo oo helo aqoon ku saabsan dhaawacyada iyo sida loogu suurtogeliyo bartayaasha inay ka gudbaan, gaar ahaan bulshadan ka dambaysa Covid-19.
Buugga waxaa laga heli karaa Amazon, Free Kindle App, iyo buugaag maqal ah.
3. Kuwa aan la baran karin
Buugga waxaa qoray qoraaga la jecel yahay uguna iibinta badan Gordon Korman.
Waxay ka hadlaysaa waxa dhaca marka fasalka ugu xun ee carruurta iskuulka lagu lammaaneeyo macallinka ugu xun.
The Unteachable waa arday fasalka caan ku ah. Sida Aldo, oo leh arrimaha maareynta xanaaqa; Parker, oo aan wax akhrin karin; Kiana, oo aan xitaa ka tirsanayn fasalka — ama fasal kasta; iyo Elaine (heesaha xanuunka leh).
Buuggan waxaa mudan in la akhriyo dhammaan macallimiinta si ay u bartaan sida loola macaamilo jilayaasha noocaas ah ee ardayda fasalka dhexdiisa.
Buugga waxaa laga heli karaa Amazon iyo Kindle.
4. Bar sida Horyaal 2.0: 62 Farsamooyin Ardayda Dhigta Wadada Kulliyadda Daabacaadda 2aad Doug Lemov iyo Norman Atkins
Waxaa qorey Doug Lemov iyo Norman Atkins, Bar sida Horyaalnimada waa buug soo jiita dhammaan macallimiinta adduunka.
Buuggu wuxuu ka kooban yahay fikrado waxbarid laga bilaabo xoojinta adkaanta tacliinta, ilaa hagaajinta maamulka fasalka, iyo dhiirigelinta ka -qaybgalka ardayda.
Waxbarid Sida Horyaal daabacaadda labaad waxaa laga heli karaa Kindle iyo Amazon.
5. Jirrabaadda (Buugga Taxanaha ah ee la ugaarsaday 1) oo uu qoray Ivy Smoak
Tijaabintu waa mid ka mid ah buugaagta ugu fiican macallimiinta, oo uu qoray Ivy Smoak.
Buuggu wuxuu ka hadlayaa arday xishood badan Penny Taylor, oo had iyo jeer raacda xeerarka. Si kastaba ha ahaatee, Penny waxay leedahay hal sir oo xaaraan ah - aad bay ugu dhacday borofisarkeeda - aad bayna u hubtaa inuu iyadana ku dhacay.
James Hunter, oo ah borofisarkii ka tanaasulay qaab nololeedkiisa bilyaneerka ee NYC ayaa fahansan awooddiisa cusub.
Xeerka cusub ee ugu fudud ee la raacayo: ha ku dhex milmin ardayda. Way fududahay in la raaco maxaa yeelay wuxuu aad ugu soo noqday magaaladiisa cusub - sida kaliya ee uu ku garan karo sida qarsoodigiisa loo qariyo. Laakiin marna ma fileynin inuu wax barayo arday aad u qurux badan. Waa inuu iska celiyaa iyada. Wuxuu u baahan yahay inuu iska socdo.
Buuggani waa cashar mudan in la barto dhammaan macallimiinta isku arka xaaladdan jirrabaadda ah.
Waxaa laga heli karaa Kindle Amazon.
6. Hacking Anshaxa Dugsiga: 9 Siyaabood oo Loo Abuuri Karo Dhaqan Dareen iyo Mas'uuliyad La Adeegsado Cadaalada Soo Celinta (Taxanaha Barashada Hack)
Buuggan waxaa qoray Nathan Maynard iyo Brad Weinstein.
XIDHIIDHKA: Waa Maxay Ciyaaraha Ugu Lacagta Badan Adduunka? | 10 Ugu Fiican 2022
Waa mid ka mid ah buugaagta akhriska ugu fiican ee macallimiinta ee Taxanaha Barashada Hack.
Buugga waxaa loo soo jeediyay macallimiinta sannadka 2022 maadaama uu iftiiminayo sida loo tirtiro ciqaabta loona dhiso dhaqanka ardayda mas'uulka ah iyo bartayaasha madaxbannaan.
Hacking Discipline School waxaa laga heli karaa Amazon iyo Buugga Maqalka.
7. Sababtoo ah waxaan lahaa Macallin - iibiyaha ugu fiican New York Times
Buugga waxaa qoray Kobi Yamada.
Sababtoo ah waxaan haystay Macallin ay khasab tahay in loo akhriyo macallimiinta sannadka 2022-ka maxaa yeelay waxay muujineysaa sida ardayda wax u barata; dhiirigelinta macallimiinta waaweyn ee halkaas jooga.
Sababtoo ah waxaan lahaa macallin waa buugga ugu fiican macallimiinta waaweyn ee adduunka oo dhan. Waa hadiyad kaamil ah Maalinta Macallinka Qaranka, Toddobaadka Mahadcelinta Macallinka, dhammaadka sannad -dugsiyeedka, iyo sababo kale oo badan oo mudan in loo dabaaldego macallimiinta 2022 -ka.
Buugga waxaa laga heli karaa Amazon.
8. Maxaad Ku Sameysaa Fikrad? - New York Times iibiyaha ugu fiican
Kani waa mid ka mid ah buugaagta ugu qiimeynta wanaagsan sanadka 2022, oo uu qoray Kobi Yamada.
Waa sheeko ka mid ah hal fikrad oo cajiib ah iyo ilmaha ka caawiya inuu dunida keeno. Marka kalsoonida ilmuhu sii korodho, ayay fikradda lafteeda kor u kacdaa.
Macallimiintu waa moodooyinka ugu fiican ee kobcinta fikradaha. Buuggu waa kan ugu wanaagsan ee loo akhriyo dhammaan macallimiinta leh fikrado ay ku kobciyaan.
Waxaa laga heli karaa Amazon.
9. Caadooyinka Atomic -ka: Si Sahlan & Cadeysan oo Loo Dhisi Karo Caadooyinka Wanaagsan loona Jebin Karo kuwa Xun
Waxaa qoray James Clear.
Qoraagu wuxuu sharraxayaa sida isbeddellada yaryar ay u beddeli karaan nolosha macallinka oo ay saamayn ugu yeelan karaan barashada ardayga iyo hab -dhaqanka ardayga.
Waa mid ka mid ah buugaagta wax -ku -oolka ah ee daaha ka qaata hagardaamooyinka nolosha.
Buuggu wuxuu noqon karaa midka ugu wanaagsan ee macallimiintu akhrin karaan 2022 -ka maadaama ay samaystaan ​​caadooyin wanaagsan oo ay jebiyaan kuwa xun. Waxaa laga heli karaa Amazon.
10. Dib -u -habayn aad u badan, Isbeddel aad u yar: Joogtaynta Guul -darrada Dugsiyada Magaalooyinka Daabacaadda 3aad, 2010
Buugga waxaa qoray Charles M. Payne.
Waxay soo jeedinaysaa aragtiyo ku saabsan sababaha keenay fashilka dugsiga iyo sida dugsiyada qaarkood ugu guuleysteen inay hagaajiyaan, gaar ahaan xarumaha magaalooyinka.
Waa mid ka mid ah akhriska ugu wanaagsan macallimiinta sannadka 2022, oo laga helo Amazon.
11. Hal -abuurka Vintage: Kordhinta Aaladaha Retro iyo Fikradaha Caadiga ah si loo naqshadeeyo Khibradaha Waxbarasho ee Qoto -dheer
Innovation Vintage wuxuu ka hadlayaa hal -abuurka macalimiinta ee fasalka dhexdiisa. Waxay muujineysaa sida macallimiintu u adeegsan karaan hal -abuurnimo si ay u kiciyaan hal -abuurka fasalka dhexdiisa.
XIDHIIDHKA: Forbes liiska dadka ugu mushaharka badan
Buugga waxaa qoray John Spencer waxaana laga heli karaa Amazon.
12. Farxadda Raad -raac: Helitaanka Baadhitaanka Ujeeddada U Keeni Doona Noloshaada
The Happiness of Pursuit waxay ka hadlaysaa in macne loo sameeyo nolosha qofka iyada oo loo marayo baadi goobka. Waa buugga ugu fiican dhammaan macallimiinta maadaama ay ku dhiirrigeliso inay raacaan fikradaha iyo hal -abuurka cusub ee fasalka dhexdiisa.
Buugga waxaa qoray Chris Guillebeau waxaana laga heli karaa Amazon.
13. Ka Baxday Maskaxdeena: Barashada noqoshada hal -abuurka
Maskaxdayadu waa mid ka mid ah buugaagta ugu wanaagsan macallimiinta sannadka 2022 -ka.
Waxaa qoray Ken Robinson, buuggu wuxuu iftiiminayaa sida ay ardaydu u noqon karaan kuwo hal -abuur leh, u fakara, una dhaqmi kara si ka duwan bulshada dhexdeeda.
14. Socodka Biyaha: Akhriska, Qorista iyo Kacaanka
Buugga waxaa qoray Derrick Jensen.
Waa buug ay tahay in la akhriyo dhammaan macallimiinta maadaama uu ka hadlayo arrimaha hal-abuurka iyo shaqsiyadda, isagoo iftiiminaya siyaabaha macallimiintu u adeegsan karaan si ay uga caawiyaan ardayda inay sii haystaan ​​jacaylka ay u qabaan waxbarashada.
15. Leverage Leadership 2.0: Hagaha Waxqabadka ee Dhisidda Dugsiyada Gaarka ah
Buugga waxaa qoray Paul Bambrick-Santoyo iyo Doug Lemov.
Waa mid ka mid ah buugaagta horumarinta xirfadeed ee ugu wanaagsan macallimiinta, oo taabanaysa hoggaaminta –muujinta sida kor loogu qaado dugsiyada si weyn iyadoo la adeegsanayo mabaadi'da aasaasiga ah. Qiimayaashu waxay qeexayaan koritaanka joogtada ah, isbeddelka, iyo kobcinta hay'ad.
Taasi waxay u egtahay muuqaal aad u fiican ilaa xad, sax?
Laakiin micnaheedu ma aha in aan daalnay liiskii akhriska oo dhan ee macallimiinta sannadka 2022. Waxaa jira buugag badan oo ugu fiican oo uu macallin kasta akhrin karo.
Akhriska buugaagtu waa mid ka mid ah dhinacyada horumarka ugu wanaagsan ee nolosha aadanaha. Buugaagtu waxay macalimiinta siiyaan raaxo si ay adduunka u sahamiyaan, wax u bartaan, u saameeyaan, oo ay saamayn ugu yeeshaan.
Buugaagta kor ku taxan waa dhowr xulasho oo ka imanaya macallimiinta akhrinta gaarka ah waa inaysan seegin. Waa kuwee buugaagta aad u malaynayso inaan ku darno liiska macallimiinta 2022?
Waa imisa Qiimaha Arooska? Isku guurso Miisaaniyadaada dhexdeeda
Weydiinta lamaanaha cusub ee is guursaday ama qorsheeye arooska waxyaabaha caadiga ah ee lammaanuhu ku qaataan xilliga arooskooda waa mid…